Revit & Bim Services E-UAE
Real Estate Listings: » Business Directory » Construction Companies » Revit & Bim Services E-UAE1
Sisebenza ngokukhethekile ukuletha ukwakheka kolwazi lokwakha - izinsizakalo ze-BIM zokuguqula ukwakhiwa kwezakhiwo, ubunjiniyela, kanye nezinqubo zokwakha, okuvumela abahlanganyeli bephrojekthi ukuthi basebenzisane kangcono futhi banciphise izindleko nesikhathi. I-Alwarqa Surveying Services iyinkampani engenakulinganiswa kulesi sizinda ngokunikeza ikhwalithi engenakuqhathaniswa kumasevisi wethu we-Building Information Modeling. Umkhuba wokukhishwa kwezinsizakalo ze-Revit BIM uvame ukwamukelwa ukukhulisa ukusebenza kwanoma iyiphi iphrojekthi. Zisetshenziswa yizingcweti eziningi ezibandakanya onjiniyela, abakhi, abakhi bezakhiwo, abaphathi bezokwakha, osonkontileka nosonkontileka abancane, abaphathi bezikhungo, abaphathi bamaphrojekthi nabezokwakha. I-imeyili ye-imeyili: - [email protected] Xhumana no: + 97142676170